Scott McTominay Oo Magacaabay Afarta Xidig Ee Da'yarta Ah Ee Mustaqbalka Wayn Ku Yeelan Doona Man United. - Gool24.Net
Scott McTominay Oo Magacaabay Afarta Xidig Ee Da’yarta Ah Ee Mustaqbalka Wayn Ku Yeelan Doona Man United.
Xidiga kooxda Manchester United ee Scott McTominay ayaa magacaabay afarta da’yar ee uu aaminsan yahay in qaabkii uu kooxda kowaad ugu soo baxay iyaguna ugu guulaysan doona waqtiyada soo socda.
Scott McTominay ayaa waqtigii Jose Mourinho waxa uu ka faa’iidaystay isku dhicihii Pual Pogba iyo Mourinho u dhexeeyay halkaas oo uu ka soo galay kooxda kowaad oo uu hadda ciyaartoy muhiim ah ka yahay.
Laakiin Scott McTominay ayaa arka afarta xidig oo da’yar ah oo dariiqii uu kooxda kowaad u soo maray ku daba socda kuwaas oo uu aaminsan yahay in ciyaartoyda kooxda kowaad ay in badan caawin doonaan.
Saddexda da’yar ee uu Scott McTominay magacaabay waxay kala yihiin Di’Shon Bernard, Largie Ramazani iyo James Garner oo ka tirsan kooxda akadamiyada United iyo waliba Mason Greenwood oo xili ciyaareedkan markii uu fursad ka helay kooxda kowaad si wayn isku soo muujiyay.
Ole Gunnar Solskjaer ayaa ah tababare horumarin ku samayn kara ciyaartoyda da’yarta ah ee uu hadda kooxda kowaad ee Man United ku haysto balse waxaa la filan karaan in kooxda da’yarta uu ciyaartoy kale ka soo dalacsiin doono.
Scott McTominay oo Man United tababarkeeda bilawday markii uu shan sano jir ahaa ayaa aaminsan in ay xarunta da’yarta kooxdiisa United ku jiraan xidigo kooxda kowaad hibo ku soo bandhigi doona oo dariiqii uu soo maray soo raaci doona.
Markii Scott McTominay la waydiiyay in uu magacaabo da’yarta hibada leh ee kooxdiisa Man United waxa uu ku daray Mason Greenwood oo 12 gool oo kooxda kowaad ah xili ciyaareedkan ku soo dhaliyay 36 kulan oo uu inta badan kaydka ka soo baxay.
Scott McTominay oo ka jawaabaya da’yarta hibada fiican leh ee kooxdiisa United ayaa yidhi: “Wiilasha sii da’yarta ah miyaa? Kuwo badan ayaa jira. Waxaad arkaysaa Di’Shon [Bernard], Largie [Ramazani], Jimmy [Garner], waxaad arakaysaa Mason [Greenwood] oo xaqiidii imanaya, waxa uu Mason ku socdaa jidkii uu ku joogtayn lahaa”.
McTominay oo ka sii hadlaya Mason Greenwood ayaa yidhi: “Isagu aad uma aha heerkii uu ku noqon lahaa mid kooxda kowaad joogto ku ah, waana waxa ay Mason waajibka ku tahay in uu ku socdo si uu u gaadho”.
Waxa uu McTominay si gaar ah u sii amaanay Greenwood wuxuuna yidhi: “Isagu waa mid ka mid ah ciyaartoyda ugu hibada fiican ee aan waqti dher soo arkay. Waxaa cajiib ah lugtiisa bidix, lugtiisa midig iyo darbooyinkiisa”.
Scott McTominay ayaa ka hadlay cida ay masuuliyadi ka saaran tahay in ay gacan qabtaan ciyaartoyda da’yarta ah ee uu soo sheegay wuxuuna yidhi: “Aniga ahaan, waa masuuliyadayda, Marcus Rashford, Jesse Lingard iyo ciyaartoyda khibrada badan ee sida Juan Mata, Nemanja Matic, Lee Grant ayaa tusaale ah. Hadda waxaanu qaadanaynaa masuuliyada aanu wiilashaas da’yarta ah u soo riixi lahayn ee aanu heerka soo gaadhsiin lahayn halkaas oo ay ku haboon tahay in ay awoodooda ku gaadhaan”.
“Qof kasta oo jooga kooxda kubbada cagta kaas ayaa ah hadafka kowaad. Aniga ayay la mid tahay, qof kasta oo shaqaalaha tababarka ah ayaa maal inkasta i riixayay” ayuu McTominay hadalkiisa raaciyay.
Ugu danbayn McTominay ayaa tilmaamay ciyaartoyda saamaynta kooxdiisa ku leh ee ay wax ka bartaan wuxuuna yidhi: “Xaqiiqdii Harry Maguire, Nemanja Matic, Pual Pogba waa ciyaartoyda saamaynta leh ee ay waajibka kugu tahay in aad maalin kastaba wax ka barato.Haddii ayna waliishu masuuliyadooda qaadan ee waayahooda ciyaareed, si deg deg ah ayay kugu dhaafaysaa”.